आहा बिचार Archives - Page 8 of 12 - AahaSanchar
Home आहा बिचार (Page 8)
दशाँई पर्वकी नाइका हुन् । गाइक, नाइक र खलनाइक को को हुन ? पाइक पर्नेहरूले जिज्ञासा राख्दा हुन्छ । यो आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि दशमी र त्यसपछि कोजाग्रत पूर्णीमासम्म मानिने विशेष पर्व वा उत्सव हो । यसलाई हिन्दुहरूको महान पर्व पनि भनिन्छ । नवौँ दिनसम्म दुर्गाको पूजा गर्नका लागि आश्विन…
जनक केसी गत वर्षको वैशाख ३१ गते आकासमा टन्टलापुर घाम थियो । किसानका घरमा कतै वाख्राहरु भोकले कराउदै थिए, कतै भैसीहरु किलाको दाउलो चुडाल्न वल गर्दै थिए भने कतै साना साना अवोध वालवालिकाहरु हातमा खाली वटुको समातेर भोकले वावा आमा भन्दै रुदै कराउदै भात खोज्दै थिए । तपाइहरु चुनावको जोडघटाउन…
जनक केसी विपी कोइरालालाइ नेपाली राजनितीमा विशेष ढंगले सम्झने गरिन्छ । उनले स्थापना गरेको नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु मात्र होइन आम नेपालीले विशेष आदर र मुल्यका साथ सम्झने गरेको नाम हो विपी कोइराला । चाहे काँग्रेस हुन या कम्युनिष्ट या राजावादी सवैले निकै पछुतो मानिरहेका छन् अहिले विपी नभएको दिनको…
स्तम्भ : ह्याँती गर्ने कुरा एमएल ओली आमाको सातौं बेतबाट औँरिएको सन्तान आज तीन वसन्त पार गरी चौथो वसन्तमा प्रवेश गर्न थालेछ । योसँग जर्मिदै हुर्किने, बेस्सरी डुक्रिने, बैरीका पम्पुरा सेक्ने अद्भूत क्षमता रहेको छ । यस्तो क्षमतावान सन्तान अँवार्दा आमालाई कति हर्ष भयो होला ? यसलाई अँवार्न गोप्या खुल्ला,…
रुकुमका बिभिन्न ठाउँमा संचालनमा रहेका विकास आयोजनाहरुमा निर्माण कम्पनीहरुको ढिलासुस्ती देखिएको छ । यसको उदाहरण बनेको छ, जिल्ला सदरमुकाम खलंगामै रहेको त्रिभुवन जनता माबिको भवन । निर्माणको जिम्मा लिएको करिब एक दशक बित्न लाग्दा पनि भवन निर्माणको काम सकिएको छैन । सदरमुकाम र सबैको आँखा पर्ने ठाउँमा त बिद्यालय जस्तो…